Filed in hosoka vaovao, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 Aprily 2017	• 16 Comments
Toa sarotra kokoa ny mahatakatra ny fomba nilalaovana ny lalao teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ao amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao mahazatra, misy ny sasany izay tonga mba hanome voninahitra an'i Donald Trump sy ireo hafa mahita an'i Putin ho ilay lehilahy miady amin'ny New World Order. Ireo tranonkala farany dia efa vonona amin'ny [...]
Nepniews, vaovao marina, hosoka, sain-diso, media sy politika; inona marina ary inona no tsy marina?
Filed in hosoka vaovao, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Desambra 2016	• 63 Comments
Nahita tahotra be izahay tato ho ato. Ity tranonkala ity dia nitatitra indraindray ary indraindray dia nanatsoaka hevitra fa tsy marina ny zavatra. Ny fanadihadiana sasantsasany dia namoaka fa ny fampihorohoroana dia ny hafa ary nisy ny "sain-diso". Tsy midika izany fa ny fanafihana rehetra [...]
Total visits: 14.669.571